ဂျပန်နိုင်ငံ၏ GDP (ပြည်တွင်းအသားတင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး) အကြိုထွက်ရှိမှု
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ GDP (ပြည်တွင်းအသားတင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး) အကြိုထွက်ရှိမှုဒေတာကို ၁:၅၀ (MT အချိန်) တွင်ထုတ်ပြန်ဖို့ ရှိပါသည်. GDP (ပြည်တွင်းအသားတင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး) အကြိုထွက်ရှိမှုဒေတာသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေကို အလွယ်ဆုံးနှင့် အနီးစပ်ဆုံး ခန့် မှန်းတွက်ချက်နိုင်သည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ထို့ ကြောင့် ယခုဒေတာသည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ငွေကြေးအပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုပြင်းသည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ယခင်နှစ် ဒီဇင်ဘာက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဂျပန် Nikkei PMI ရဲ့ စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုစတုတ္ထသုံးလပတ်စာ အညွှန်းကိန်းများအရ Q4ကာလမှာ ၀.၃% ရှိခဲ့ပါတယ်. အခုထွက်ရှိမယ့် ဒေတာသည် JPY (ဂျပန် ယန်း)အပေါ် သက်ရောက်မှုပြင်းသည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.